Qaraxyo mataana ah oo aad u culusay ayaa ka dhacay gagida dayuuradaha ee xerada qaxootiga Dhadhaab | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Qaraxyo mataana ah oo aad u culusay ayaa ka dhacay gagida dayuuradaha...
Qaraxyo mataana ah oo aad u culusay ayaa ka dhacay gagida dayuuradaha ee xerada qaxootiga Dhadhaab
Waxaa laga maqlay qaraxyo aad u cul culus oo is xig xigay gagida dayuuradaha ee xerada qaxootiga Dhadhaab, taas oo wal wal iyo walbahaar badan ku beertay dadka kunool xeryaha qaxootiga iyaga oo umaleeyay in uu qaraxyadu ka dhex dhaceen gudaha xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
Sikastaba ha ahaate, gagida diyaaradaha ee Dhadhaab ayaa waxaa isticmaalo howl wadeenada iyo madaxda hey’ada qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey ee (UNHCR) kuwaas oo ka caawiyo qaxootiga ku jiro xeryahaas dhinaca waxbarashada caruurta, qeybinta cuntada iyo waliba u fududeynta fursado dibada loogu qaado.
Dhinaca kale, Dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga ayaa waxaa lagu wadaa in dib loogu celiyo Soomaaliya. Kadib markii heshiis sadex geesood ah ay saxiixdeen Dowlada federalka Somaaliya, Dowlada kenya iyo hey’ada qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga. Iyadoo sidoo kalana daba yaaqadii bishii ina dhaaftay uu wasiirka arimaha gudaha ee Dowlada kenya ugu baaqay qaxootiga jooga magaalooyinka sida Nairobi in ay dib ugu laabtaan kuna ekaadaan xeryaha qaxootiga. Taas oo dhib weyn ku keentay qaxootiga Soomaaliyeed ee kusugan magaalada Nairobi.
Ugu danbeyntii, hadalka kasoo baxay wasiirka arimaha gudaha ee Dowlada Kenya ee ku aadan dib ugu laabashada qaxootiga ee xeryaha iyo qaraxyadii ka dhacayay dhawaanahan magaalada Nairobi iyo kuwa hada kasoo cusboonaaday xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa dadka ku xeel dheer arimahaan ku tilmaamayan in ay tahay u jeedo laga leeyahay in dadka Soomaaliyeed lagu baro muhiimada sharciga iyo Dowladnimada.
Previous articleJawaari oo muujiyay in uu yahay hogaamiyaha Digil iyo Mirifle
Next articleIsbaheysi siyaasadeed xoogan oo dhan ka ah madaxweynaha Soomaaliya oo laga abaabulayo Nairobi Kenya.